मध्यरातमा त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट अायो यस्तो दुःखकाे खबर…. हेर्नुस भिडियो – PathivaraOnline
Home > भिडियो > मध्यरातमा त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट अायो यस्तो दुःखकाे खबर…. हेर्नुस भिडियो
admin November 26, 2018 भिडियो, समाचार	0
काठमाडौँ। देशको एकमात्र अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा कस्तासम्म वेथिति र भाँडभैलो देखिन्छ भन्ने उदाहरण हिजो रातिको घटनालाई लिन सकिन्छ। अस्तव्यस्तताको हद नाघेपछि नेपाल एयरलाइन्समाथि यात्रुहरू खनिए र एयरपोर्टमै हँगामा चल्यो। हिजो आइतबार राति काठमाडौँ स्थित त्रिभुवन विमानस्थलमा भागाभाग चल्यो। यात्रुको आक्रोशले त्यहाँ निकैबेर हँगामा चल्यो। एयरपोर्ट कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीलाई भिडको आक्रोश थाम्न हम्मे पर्यो।
नेपाल एयरलाइन्सबाट दोहा उड्न पर्खेका यात्रुको धैर्यताको बाँध टुटेपछि एयरपोर्टका कर्मचारी र सरक्षाकर्मीलाई सम्हाल्न हम्मे पर्यो। सूचना नदिइकन जहाजको उडान ढिला गरिरहेको र अन्तिममा जहाज नै नउड्ने बताएपछि कुरेका यात्रु एकाएक आगो भएका हुन्। उनीहरूको आक्रोश नेपाल एयरलाइन्सका कर्मचारी माथि थियो। यात्रुले हँगामा सुरू गरेपछि नेपाल एयरलाइन्सका कर्मचारीको भागदौड चलेको थियो।
महिलाको नाममा कलङ्क: श्रीमान विदेशबाट फर्किने थाहा पाएपछि आफुभन्दा १४ वर्ष कान्छोसँग छोरासँगै भागिन् यी महिला! (भिडियो)
निर्दयी शिक्षिका :जति चिच्याएपनि फलामको स्केलले लगातार आक्रमण गरिरहदा बिरामीको भयो यस्तो हालत